ARAG: Sida ay u muuqan lahayd kala Sarreynta horyaalka Premier League haddii laga soo bilaabo tan iyo markii uu Solskjaer xilka u qabtay Man United – Gool FM
(Yurub) 29 Maarso 2019. Waxaa la shaaciyey sida ay u muuqan lahayd kala sarreynta horyaalka Premier League haddii laga soo bilaabo tan iyo markii macallin Solskjaer loo dhiibay hoggaanka kooxda Manchester United.
Manchester United ayaa shalay ku meel gaarnimada ka saartay tababare Solskjaer, iyadoona xilka si joogto ah ugu aamintay macallinka reer Norway, kooxda ka arrmisa garoonka Old Trafford ayaana heshiis saddex sano ah la gaartay Solskjaer kaa oo xilka ka dhaxlay tababare Jose Mourinho.
Solskjaer ayaa bandhig ka wanaagsan koox kasta oo kale ka sameeyey horyaalka Premier League tan iyo markii xilka Man United si ku meel gaar ah loogu dhiibay 19-kii bishii December ee sanadkii hore.
Marka sheekada laga soo bilaabo tan iyo markii macallin Ole Gunnar Solskjaer xilka kooxda loo dhiibay Manchester United ayaa hoggaanka u hayn lahayd horyaalka Premier League iyadoo leh 32-dhibcood.
Kaalinta labaad waxaa ku jiri lahayd Liverpool oo hal dhibic ka dambeyn lahayd Man Utd, iyadoo Reds ay uruursatay 31-dhibcood, Man City oo leh 30-dhibcood ayaa kaalinta saddexaad ku jiri lahayd, iyadoo labo dhibcood ka dambeysa kooxda ay dariska ku yihiin magaalada Manchester.
Arsenal ayaa saldhigan lahayd kaalinta afaraad iyadoo leh 26-dhibcood, Spurs ayaana ka soo muuqan lahayd kaalinta shanaad iyadoo leh 22-dhibcood, halka kooxda Chelsea ay hoos ka hoggaamin lahayd lixda kooxood ee sare waxaana ay uruursatay tan iyo markaas 20-dhibcood oo kaliya.
Haddaba halkaan hoose ka eeg kala sarreynta horyaalka Premier League tan iyo markii Solskjaer loo dhiibay xilka kooxda Man Utd:-
"Isbitaal ayaan ku dhigi doonaa haddii...".- Makelele oo qiray inuu si toos ah ugu Hanjabay Ronaldinho....(Sidee wax u dheceen!?)+SAWIRRO